Dhageyso:- Wasiirkii Difaaca ayaa Dowladda ku eedeeyay balankii inay uga baxday Mukhtaar Roobow. – XOGMAAL.COM
Dhageyso:- Wasiirkii Difaaca ayaa Dowladda ku eedeeyay balankii inay uga baxday Mukhtaar Roobow.
C/rashiid Cabdullahi ayaa la hadlay idaacadda VOA-da wuxuu sheegay qodobada la isku afgartay ee dhanka dowladda uu ka fuli waayay inay ka mid aheyd in si wadajir ah oo dalka iyo dadka dano ah lagu wada hawlgalo, balse arrintaasi iyo kuwa kaleba ay dowladda ka baxday.
By Soomaaliya	 Last updated Oct 9, 2018
C/rashiid Cabdullahi Maxamed Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya oo ahaa ninka bilaabay wada hadalka dhexmaray dowladda iyo Sheekh Muqtaar Roobow ayaa sheegay qaabkii loo balamay in badan oo ka mid ah in dowladda dhankeeda uusan ka fulin heshiiskaa.
Muqtaar Roobow oo tagay Baydhabo ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, Intaasi ka dib Dowladda Soomaaliya waxaa ay qoraal ku sheegtay in aysan sax aheyn in Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo ka tirsanaa Al Shabaab marna noqday kuxigeenka hoggaanka ururkaasi uu u tartamo xilka intaa la eg.
Inkastoo warar soo baxayay ay sheegayaan in qaab hoose arrinkaasi loo xaliyay.